DEG DEG:-Qarax Ka Dhacay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA DEG DEG:-Qarax Ka Dhacay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir
DEG DEG:-Qarax Ka Dhacay Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir
Wararka aanu ka helayo xarunta dowladda hoose ee Xamar ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay gudaha xarunta,iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxa uu fuliyay qof xirnaa walxaha qarxa xiligaas uu ka socday shir xasaasi ah oo looga hadlay amniga isla markaana ay goob-joog ka ahaayeen inta badan masuuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaan ahse’ahaatee waxaa xiligaas goobta ku sugnaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng: Yariisoow,Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute iyo masuuliyiin kale oo kulanka ku sugnaa.
Weriyaal ka tirsan warbaahinta dalsan oo xiligaas ku sugnaa madasha shirku uu ka socday ayaa sheegay in mar qura ay arga-gaxeen dhamaan dadka goobta joogay isla markaana ay iyagu arkeen dad qaba dhaawacyo.
Warar aan la xaqiijin ayaa ayaa sheegaya in uu dhawac soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Eng: Yariisoow waxaana la arkayay iyada oo ay lasii cararayaan qaar ka mid ah ilaaladiisa khaaska ah.
La soco goor dhow wararkaan oo faah-faahsan.
Previous articleWeerar Sababay Dhimasho Dad Rayid ah oo Xalay ka dhacay Deegaanka Qor-qoora Ee Bariga Gaalkacyo
Next articleFaahfaahin: Qarax ka dhex dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo Yariisow oo dhaawac ah